Sajhasabal.com |भ्यालेन्टाइन डेको अफर: एउटा मोबाइल किन्दा अर्को सित्तैमा !
भ्यालेन्टाइन डेको अफर: एउटा मोबाइल किन्दा अर्को सित्तैमा !
फागुन १, काठमाडौं । केएल मोबाइल हबले एउटा मोबाइल किन्दा अर्को एउटा मोबाइल सित्तैमा दिने अफरसहित मोबाइल मेला सुरु गरेको छ ।
त्यसै गरि मेला अवधिभरी आयोजना हुने फोटो कन्टेस्टमा प्रथम र दोस्रो हुनेलाई क्रमशः ओप्पोको एफ फाइभ मोबाइल तथा भिभोको भि ७ मोबाइल प्रदान गरिने मोबाइल हबका निर्देशक संगम राइले बताए ।